FAQ-Nantong GAOYA vy FIRAFITRA CO., LTD.
Ianao na varotra orinasa fanamboarana orinasa?
Isika orinasa fanamboarana. Nandray ianao hitsidika anay na oviana na oviana. Ao amin'ny atrikasa,dia manana fitaovana rafitra nandroso tanteraka noho ny fanaovana vy rafitra sy ny kobany. Noho izany dia afaka ny ho azo antoka ny kalitao tsara ary koa ny fifaninanana vidiny.
Nahoana no nifidy anareo?
Koa satria hiditra ao amin'ny tsena iraisam-pirenena, efa lasa mpiara-miasa ara-barotra avy any ivelany maro companies.Partner eo amin'ny Isiraely hoe:,"Izahay tsy nifidy anareo noho ny vidiny sy ny kalitao,fa koa ny andraikitra sy ny fahadiovam-po izay mendrika ho ahy namana azo itokisana. "
Ahoana ny momba ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny?
voalohany,ny vokatra taona izay no lasa EN1090 sy ISO9001:2008,izay midika hoe ny vokatra no notsapaina ny fahatelo party.And alohan'ny fanaovana ho famokarana,rehetra ny akora tsy maintsy notsapaina tamin'ny advance.During famokarana,manana andiam-fikarakarana antontan-taratasy fanondroana, mpiasa dia ampiharina araka ny fitsipika sy ny fanaraha-maso ny kalitao manara-maso ny famokarana personnel.After,manana injeniera mba hanamarinana ny toetra sy ny handray andraikitra noho izany.
Ahoana no hahazoana ny notsongaina avy aminao?
Azonao atao ny hifandray antsika na oviana na oviana amin'ny alalan'ny Email, WhatsApp, Skype sy ny fomba hafa,ary omeo kely fototra vaovao,manokana toy ny haben'ny ny trano,ny habeny sy ny dia be ny varavarana sy varavarankely,ny zavatra tianao hampiasaina ny rindrina sy ny roof.After izay,dia afaka manome anao ny tokotokony vola an 30 minute.If tokony ho fantatrao bebe kokoa ny antsipiriany,andao hiresaka bebe kokoa.
Afaka manolotra asa fanompoana famolavolana?
Eny,dia manana ekipa injeniera ary afaka mamaritra ho anareo araka ny requirements.Architectural sary,structure sary,fikarakarana sy ny fametrahana sary antsipirihany sary ho atao ary aoka ianao manamafy amin'ny fotoana samy hafa ny tetikasa.
Inona ny fotoana fanaterana?
Ny fanaterana ny fotoana dia miankina amin'ny habeny sy ny fatran'ny building.Generally ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fandraisana ny ampahany payment.And sambo no mba namela ho an'ny lehibe.
Ve ianao manolotra asa fanompoana ho an'ny fametrahana?
Yes.We koa ny fametrahana ekipa abroad.Firstly,fametrahana sary dia homena alohan'ny entana tonga amin'ny toerana port.If ilainao,dia afaka mandamina injeniera mba hanao ny fampianarana eo amin'ny tetikasa site.For tetikasa lehibe sy ny mpanjifa fepetra,dia afaka manome iray manontolo ekipa tetikasa.
Inona ny fandoavam-bola teny?
30% petra-bola sy ny 70% fifandanjana eo anatrehan'i fandefasana.